UMpisane ubhoboka ngomjolo wakhe
SEKUFANA nephupho ukuthi uMnuz Sbu Mpisane noNkk Shauwn Mpisane bake babukwa yizwe lifise ukuba yibo ngenxa yothando olwalubonakala uma sebexhakene emicimbini noma begqigqa amacala amabhizinisi abo. Namhlanje bafakana enkantolo njengoba besezinhlelweni zokwehlukanisa umshado Isithombe: Thokozani Ndlovu
DELI MNCWABE | August 19, 2019
UPHEFUMULE okokuqala usomabhizinisi waseThekwini uMnuz Sbu Mpisane ngezinsolo zokuphinga nokukholakala ukuthi ziyimbangela yokugqabuka kwefindo lomshado phakathi kwakhe nonkosikazi wakhe uShauwn.
Kuleli sonto indodana kaMpisane u-Andile ibize uyise ngembungulu esizitike ngegazi likanina iminyaka engu-25 beshadile, iphinga iphinde ithola izingane ngaphandle.
UMpisane uvumile ukuthi wake wajola. Nakuba engavezanga imiminingwane ngakho kodwa ukuqinisekisile.
“Angiphiki ngake ngajola kodwa angikholwa wukuthi lokho kungaba yimbangela yokuphela komshado,” esho ngamafuphi.
Uthe yinto eyenzeka esikhathini esedlule. Uthe yinto eyenzekayo ukuthi amadoda ajole eceleni nokuvame ukuthi kukhulunywe ilungiswe abashadile kungaqedwa umshado.
Imizamo yokuthola ukuphawula kukaNkk Mpisane okuthiwa usefuna ukubizwa ngoMkhize okuyisibongo sakubo, ayiphumelelanga. Iphephandaba limshayele ucingo kodwa kwaba ukuzwa ukuthi Isolezwe ngeSonto wavala ucingo. Ngemuva kwalokho uthunyelwe iSMS, i- email kodwa kwacweba isiziba.
FUNDA: Indodana kaMpisane ikhwela yadilika kuyise ‘ngokumdlela’ iqembu
Ngokuka-Andile, uthe ngokolwazi analo zine izingane azaziyo uyise azizale kwabesifazane abethandana nabo.
Encwadini ayishicilele kwi-Instagram ebe yizigaba ezimbili, * -Andile usole uyise ngokuzitamuzela imali kanina nokuqhiphotheka emzini kanina yize engakhokhi ngisho indibilishi maqondana nezidingo zekhaya.
“Ngimbiza ngomyeni kamama ngoba angimthathisi okukababa wami. Ubaba wangempela ngeke angakhulumisani nendodana yakhe iminyaka emibili,” kubhala * -Andile.
Kule ncwadi * -Andile uthe uyise uhudula izinyawo ngamabomu, akafuni ukuhlukana nonina.
Ilungu lomndeni lakwaMpisane elingathandanga ukudalulwa liyithele ngamanzi yonke inkulumo ka-Andile, lathi lisola ukuthi kunesandla sesithathu esiyibhalile.
“Siyazi ukuthi le ncwadi inhloso ukuthi ibukeke sengathi ibhalwe uyena kodwa kuyabonakala ukuthi akuyena. Ngimazi kahle akasoze abhala kanje nezinga lokucabanga nobuhlakani lakhe alikho kuleli zinga. Ukhona lo ozifihlile oyibhalile,” kusho ilungu lomndeni wakwaMpisane.
Liqhube lathi noma angathini * -Andile kodwa uyohlezi eyindodana kuyise. Isiko lesintu nalo likubeka kucace ukuthi ufanelwe wukuhlonipha uyise.
Ngaleyo ndlela akafanelwe wukukhuluma izindaba zikayise zangasese esidlangalaleni noma ngabe sekwenzenjani, wayenezingane ayezithole,” kuqhuba ilungu lomndeni wakwaMpisane.
Leli lungu lomndeni lithe uyakhohlwa * -Andile ukuthi kuneFoundation eqanjwe ngaye.
“ Lokhu kumenza abe wumuntu ofanele ukuziphatha ngokucophelela kunalobu budlabha abukhombisayo. Ngikhalela izingane ezimthathisa okwesibonelo okulindeleke ukuthi zifunde kuyena inhlonipho nokuziphatha kahle.”
Leli lungu lakwaMpisane licacise nangodaba lweqembu lebhola iRoyal Eagles FC akhale ngayo * -Andile, nasola uyise ngokumphuca benonina.
Uthe kwasekuqaleni iqembu labhaliswa ngokusemthethweni ngegama likaMpisane.
“Akuwenzi umqondo ukukhala kwakhe njengoba ethi kudingeke ahoxe ekubeni ngumniniyo ngoba ayikaze ibhaliswe ngaye kwasekuqaleni. Uhubhuza amanga uma ethi eyakhe.”
Uqhube wathi kungaba yihlazo uma uMpisane engaphonsela indodana yakhe inselelo athi ayikhiphe ubufakazi ngekushoyo bucutshungulwe.
“ Into ekhulunywayo nesifike emadlebeni abaningi wukuthi * -Andile nonina bake bazama ukukhwabanisa ubunikazi beqembu banikeza nolwazi olungamanga lapho kubhaliswa khona amaqembu ebhola nokuyinto ethathwa njengokwephula umthetho,” kuphetha ilungu lomndeni wakwaMpisane.